खुशीको खबर !! अब कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने….::Leading Nepal News
खुशीको खबर !! अब कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने….
वैशाख २९, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सार्वजनिक हुने नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमा निजामती कर्मचारीको मासिक तलब हाल खाइपाइ आएको भन्दा करिब १५ देखि २५ % सम्म बढाउने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालयल स्रोतले जानकारी दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अत्यधिक दबाब छ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने तलब पुनरावलोकन समितिले पनि कर्मचारीको तलब वृद्धिको सिफारिस गर्ने भएको छ । तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य र छलफल थालिएको पुनरावलोकन समितिका एक सदस्यले बताए ।कर्मचारीको तलब वृद्धि तीन वर्षदेखि भएको छैन । बजारको महंगीअनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि तीन वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेको थिएन ।
तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले यसपटक बढ्ने सरकारकै उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको रूपमा रहेको वृद्धवृद्धाको भत्ता पनि यसपटक करिब १ हजार बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढ्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार आगामी आवको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएसँगै अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी व्यस्तताका साथ बजेट निर्माण कार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको जग हाल्ने वर्षका रूपमा लिएको बताउँदै आएका छन् । आगामी आवदेखि समृद्धिको जगमा इँटा थप्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि आगामी बजेट निकै मेहनतका साथ बनाउनुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।